Dating myanmar, online ghana dating singles
Remember that dating sites are one of the social tools you can use to meet people and liveamore complete life more colorful.
Join our growing singles community in Myanmar and Get Connected with free mail, forums, blogs, IM, and chat. Communicate free with quality, successful, fun, exciting, sexy Myanmar singles - free of any charges whatsoever. Join Myanmar Dating, It's 100% FREE » -I amacheerful and open-minded person with pleasant personality.
ညဘက် ခေါင်းအုံးအောက်မှာ ထားအိပ်ပြီး နေ့ခင်းဘက်သွားလေရာကို ယူဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်. နေ့စဉ် နေ့ရောညပါ အချိန်ရတိုင်း မကြာခဏ အဲဒီ အရွက်စုံတွဲ ထည့်ထားတဲ့ ပ၀ါထုပ်ကို ညာလက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ပြီးမှ အောက်ပါအတိုင်း နှုတ်က နှစ်ခေါက်ရွတ်ပါ- “ ချစ်သူ အမြန်ဆုံး ရရှိဖို့ ကူညီပေးပါ” ဒီအစီအမံကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ အာရုံစိုက်ပြီးလုပ်ရင် စတင်လုပ်ချိန်မှ (၈)ရက်အတွင်းမှာ ဖြစ်စေ၊ (၈)ပတ်အတွင်းမှာ ဖြစ်စေ ချစ်သူ(ရည်းစား)ရရှိတတ်ပါတယ်.တချို့မှာတော့ (၈)လခန့်ကြာမှ ရတာမျိုးလဲ ရှိပါတယ်. တနင်္လာနေ့ မနက်ပိုင်း (၈)နာရီခွဲမှ (၁၀)နာရီအတွင်းဖြစ်စေ၊ ညပိုင်း (၈)နာရီခွဲမှ (၁၀)နာရီအတွင်းဖြစ်စေ ရေးရပါမယ်..
ဆရာကြီးဦးအောင်မြိုင်(ဥပဒေဘွဲ့)ရေးသားသော စာအုပ်မှ ပြန်လည်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်.. အားလုံးကိုခင်မင်လေးစားလျက် ကောင်းကင်ကောင်လေးများအဖွဲ့ချစ်သူများဖြစ်တတ်သော အလေ့အထ(ချစ်သူ စည်းကမ်း) ကျွန်တော်ဒီနေ့ ကျွန်တော် အမြင်လေတစ်ခုကို တင်ပြပါမယ်.။ ချစ်သူရည်စားတွေ အတွက်ပါ.။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ချစ်သူဖြစ်သွားကြပြီးဆိုပါစို့.။ ချစ်စ ခင်စ ကြင်နာစ အချိန်မှာ.တစ်ဦးရဲ့စကား တစ်ဦးက မှားနေရင်တောင်…အနမ်း (၁၀ ) မျိုး အောက်ပါ အနမ်း (၁၀) မျိုးထဲက ကျနော့်ချစ်သူကို မေးကြည့်တယ်။ ဘယ်ဟာပိုကြိုက်သလဲလို့။ သူကတော့ တစ်မျိုးစီ ကြိုက်တာချည်းပါပဲ တဲ့။ အဲဒါကြောင့် လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး၊ ကျား/မ မရွေးသိရှိနိင်ပါ စေကြောင်း ရည်စူးပြီး တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ (၁) ရေတံခွန်အနမ်း= ချစ်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါ တောင်အမြင့်ပေါ်က စီးကျလာတဲ့ ရေတံခွန်လို ချစ်သူ့ကိုယ်လုံးလေးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွေ့ဖက်ထားပြီး အားပါးတရ တရစပ် နမ်းခြင်း။ (၂) ရွှင်ပျော်ပျော်အနမ်း= ချစ်သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ ယားတတ်တဲ့ နေရာတွေကို လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ တို့ဆိပ်ရင်း ရယ်ရွှင်လာ အောင်လုပ်ပြီးမှ နမ်းခြင်း၊ (၃) ၀ိုင်းကြီးပတ်ပတ်ဒူဝေေ၀အနမ်း= ချစ်သူရဲ့နှုတ်ခမ်းကို ငုံစုပ်ပြီး မနမ်းပဲ အပေါ်ယံနှုတ်ခမ်းသားလေးတွေအပေါ် လျှာဖျားလေးနဲ့ တို့ထိကလိ ပေးလျှက် နမ်းခြင်း၊ (၄) စွမ်းအင်ပြည့်အနမ်း= နှုတ်ခမ်းကို လုံးဝမထိမိစေပဲ ချစ်သူ့တစ်ကိုယ်လုံးကို ရင်ခွင်ထဲထည့်ကာ ချစ်သူ့ကျောပြင်ကို လက်ချောင်း များဖြင့် ပွတ်သတ်ပေးခြင်းဖြင့် နမ်းခြင်း၊ (၅) ရေခဲစိမ်အနမ်း= ပူအိုက်တဲ့ရာသီမှာ ချစ်သူနဲ့အတူ ရေခဲမုန့်စားခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အအေးသောက်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ နှုတ်ခမ်းများကို အေးစက်အောင်လုပ်ပြီးမှ နမ်းခြင်း၊ (၆) မူဟန်ကြွယ်အနမ်း= ချစ်သူနဲ့အတူနေတဲ့အခါ အလျှင်စလိုမနမ်းမိစေပဲ ချစ်သူလိုလားမှန်းသိသည့်တိုင် မသိယောင်ဆောင်နေပြီး သူ့ဘက်က အငမ်းမရတောင်းတလာမှ နမ်းခြင်း၊ (၇) တူးတူပုန်းအနမ်း= ချစ်သူနဲ့ပြေးလွှားဆော့ကစားရင်း ကိုယ်အချင်းချင်းပွတ်သတ်ထိတွေ့စေပြီး ပျော်ရွှင်အူမြူးအောင်လုပ်ပြီးမှ နမ်းခြင်း၊ (၈) အာရှအနမ်း (သို့) မွှေးမွှေးပေးခြင်း= နှုတ်ခမ်းချင်းမထိစေပဲ ချစ်သူရဲ့ နဖူးပြင်၊ ပါးပြင်စသည်ကို မွှေးမွှေးပေးခြင်းဖြင့်နမ်းခြင်း၊ (၉) သကာစိမ်အနမ်း= ချော့ကလက်သကြာလုံးစသည်ကို တစ်ဦးပါးစမ်းထဲ တစ်ဦးပါးစပ်ဖြင့်ထည့်ပေးလျှက် အပြန်အလှန်နမ်းခြင်း၊ (၁၀) ငတက်ပြားအနမ်း= ချစ်သူနဲ့အတူ တွဲသွားတဲ့အခါ ပတ်ဝန်းကျင်လူ အခြေအနေကြည့်လျှက် လစ်ရင်လစ်သလို နမ်းခြင်း၊ ဟု အနမ်း (၁၀)မျိုးပါးကို မှတ်သားရပါကြောင်း။ နတ်လူသာဓုခေါ်စေသော် By အလင်းတန်းအသဲကွဲလျှင် အမျိုးသားများက ပိုခံစားရ လန်ဒန်ရှိ တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှ စိတ်ပညာ ပါမောက္ခ ဦးစီးလို့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်တမ်း တစ်ခုအရ ဖြစ်ပါတယ်။ Relation တစ်ခု ပြီးစုံ သွားတဲ့ အခါတိုင်း ချစ်သူနဲ့ ပြတ်ဆဲ သွားတဲ့ အခါတိုင်း အမှန်တကယ် အခံစားရဆုံးက အမျိုးသားဘက်က ဖြစ်ကြောင်း သိရ ပါတယ်။ အပေါ်ယံမှာ အမျိုးသမီးများက ပိုမို ခံစားရတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် အမှန်တော့ အမျိုးသမီးများက မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းများနဲ့ ပြန်လည် ဖြေသိမ့် နိုင် ပါတယ်။ အချို့ ဆိုရင် နောက်ထပ် Relation တစ်ခုကို အချိန်သိပ်မကြာပဲ နဲ့တောင် ထပ်မံ စတင်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ ပါတယ်။ အမျိုးသား အများစု အနေနဲ့ ကတော့ ချစ်သူနဲ့ ပြတ်ဆဲတိုင်း စိတ်ဝေဒနာ ခံစားရပြီး ရင်ကွဲနာ ကျတဲ့ အချိန်က ပိုမို ကြာမြင့်တတ် ပါတယ်။ ယင်းကာလ အတွင်း အခြား လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါ အမျိုးသမီးနဲ့ သာမန်လူများထက် လျော့ကျ တတ်ပါတယ်။ အချို့ အမျိုးသားဆိုရင် အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေများနဲ့ ဆက်ဆံရေး ရော့ရဲ တဲ့ အထိ ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အမျိုးသား များအဟာ အသဲကွဲရင် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမို ထိရှ ခံစားလွယ်ကြောင်း အသိအမှတ် ပြုခဲ့ကြ ပါတယ်။ .
You can search for Myanmar singles with pictures in your area or overseas.
You can also find single ladies and foreign men in our free Myanmar online dating website.
Completely free online dating for Myanmar singles meet at
Myanmar has many single men and women just like you seeking online love and romance, friendship, relationship & marriage.
Dating in Myanmar, free Myanmar online dating on Dating Me Online.com!
bangalore sex girl mobile no
bessere seite metalflirt blackflirt